Toy Poodle - Fluffiest၊ Cutest နှင့်အသေးဆုံး Poodle အတွက်လမ်းညွှန်တစ်ခု - Breeds
Toy Poodle - Fluffiest၊ Cutest နှင့်အသေးဆုံး Poodle အတွက်လမ်းညွှန်တစ်ခု
လက်အိတ်ခွေးတစ်ကောင်အတွက်အများမှား သို့မဟုတ်ပင်ဝက်ဝံရုပ် Toy Poodle သည်ပထမဆုံးမျက်စိနှင့်တွေ့သည်ထက် ပို၍ ရှိသည်။
ကောင်းမွန်သောအချိုးအစားရှိသောခန္ဓာကိုယ်နှင့်အတူကြော့ရှင်းသောအသွင်အပြင်၊ နှင့်သေးငယ်တဲ့ curly သော့ခလောက် ၎င်းတို့သည်သေးငယ်သောအရွယ်အစား မှလွဲ၍ Standard Poodle နှင့်တူညီကြသည်။
Toy Poodle သည်အသိဉာဏ်ရှိသောမျိုးစိတ်ဖြစ်ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကာယပိုင်းနှစ်ခုလုံးကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ဤခွေးသည်ကစားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ဖျော်ဖြေမှုတွင်ထူးချွန်သည်။ ညအချိန်တွင်ဤမျိုးပွားခြင်းသည်ချစ်ရသူများနှင့် ကပ်၍ ထိုင်သည်ကိုနှစ်သက်သည်။
အပိုခွေးပေါက်စ pamper အစည်းအဝေးများစိတ်ထဲမထားနှင့်သူတို့၏နေ့စဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဒီဖောက်ထောက်ပံ့နိုင်သူပိုင်ရှင်များအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောဖောက်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်လူသိများ။
သူတို့ကသေးငယ်ပေမဲ့ဒီခွေးအမျိုးအစားကထောက်လှမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အရွယ်အစားကအရေးမကြီးဘူးလို့ဖော်ပြတယ်။ ဒီ Poodle အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါ။
Toy Poodle ခွေးပေါက်စ
Toy Poodle ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
Toy Poodle အရွယ်အစားနှင့်အသွင်အပြင်
တစ် ဦး ကစားစရာ Poodle သည်
တစ် ဦး ကကစားစရာ Poodle လေ့ကျင့်
သူတို့ကကျိန်းသေ cuddle- ဖော်ရွေခွေးဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသွက်သွယ်လမ်းလျှောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်မီးအားဖြင့်သူတို့အားနှောင်းပိုင်းတွင်ညအတွင်းရှိရဲ့ဖြစ်စေ, သင်၏အနားမှာဖြစ်ခြင်းကိုးကွယ်။
Toy Poodle သည်မူကွဲအမျိုးအစားငယ်တစ်ခု ဖြစ်၍ Standard Poodle မှပေးသောအကောင်းဆုံးအရည်အသွေးများကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ရွေးချယ်မွေးမြူ Standard အရွယ်မိဘမှအဖော်လိုက်ခွေးဖြစ်ရန်၎င်းတို့သည်ပိုမိုသေးငယ်။ ပိုမိုလွယ်ကူသောအရွယ်အစားကိုပိုနှစ်သက်ကြသည်။
သုံးရှိပါတယ် အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား Poodles အရာများအားလုံးကိုအမေရိကန် Kennel Club မှအသိအမှတ်ပြုသည်။
စံ (၁၅ လက်မအထက်တွင်ရပ်နေသည်)
သေးသေးလေး (၁၀ လက်မမှ ၁၅ လက်မ)
အမြင့်ဆုံး ၁၀ လက်မအမြင့်ရှိသည့် Toy Poodle
Toy Poodle ကိုသေးငယ်သော Miniature Poodle ခွေးများမှပေါက်ဖွားခဲ့ပြီး၊ အငယ်စား Standard Standard ဗားရှင်းများမှမွေးဖွားခဲ့သည်။
Toy Poodle ကိုနားလည်ရန်အတွက်ပိုမိုနီးကပ်စွာလေ့လာရန်လိုအပ်သည် အဆိုပါစံ Poodle ရဲ့သမိုင်း ။
Standard Poodle ကိုပြင်သစ်နိုင်ငံ၏ခွေးအဖြစ်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ သော်လည်း ဒီဖောက်ပြင်သစ်အရစ္စတိုတယ်နှင့်အတူအလွန်ရေပန်းစားခဲ့သည် သူတို့တကယ်ဂျာမနီကနေဆင်းသက်လာ!
အငြိုးအတေးကြီးတဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေထဲကတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို“ သေနတ်” ခွေးများလို့လူသိများကြသည်။
ဒီခွေးသည်အလွန်ဥာဏ်ရည်မြင့်မားသော၊ သူတို့ဟာအလွန်အမဲလိုက်ဖို့မသုံးကြပေမယ့်သူတို့ရဲ့အလှအပနှင့် ဦး နှောက်အတွက်ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။
Toy Poodle ကဘယ်ကလဲ။
Toy Poodle သည်အသေးစားမျိုးစိတ်မှဆင်းသက်လာသည်။
သေးငယ်သော Poodle ကိုဖန်တီးရန် (Poodle အမှိုက်သရိုက်များမှ) အသေးငယ်ဆုံးခွေးပေါက်စများထဲမှအသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သောအင်္ဂလန်နိုင်ငံ၌ ၁၈ ရာစုအတွင်းတွင်မျိုးပွားခဲ့ကြသည်။
Toy Poodles တွင် Standard အရွယ်အစားရှိသောမိဘ၏နှစ်သက်ဖွယ်ရာများ၊ စမတ်ကျမှုများနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာများရှိသည်။ ၎င်းတို့သည်သေးငယ်သောအထုပ် (အတိအကျဖြစ်ရန် ၅ လက်မပိုသေးသည်) တွင်သာရှိသည်။
ကစားစရာခွေးအမျိုးအစားများသည်လူကြိုက်များလာသည် US နှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိသားစုများ၊ ဒီကစားစရာအရွယ်ခွေးကလူကြိုက်များတာကသဘာဝပဲ။
Toy Poodle အချက်အလက်
အရွယ်အစား ညှိုးနွမ်းဖို့အများဆုံး 10″
အလေးချိန်6မှ9ပေါင်
သက်တမ်း 12 - 15 နှစ်
အသင့်တော်ဆုံး မိသားစုများ၊ တစ်ကိုယ်ရေသမားများ၊
အရောင်အမျိုးမျိုး အဖြူရောင်၊ Cream၊ Apricot၊ အညိုရောင်၊ အနီရောင်၊
အပူချိန် Live, Playful, Intelligent, Loving နှင့် Athletic
အခြားအမည်များ Teddy Poodle, French Poodle, Barbone သို့မဟုတ် Caniche
ကျောင်းသားသုံး ဦး ကိုများသောအားဖြင့်အရွယ်အစားရှိသော Poodles များအမှိုက်များဖြင့်မွေးဖွားသည်။
ပျှမ်းမျှ Toy Poodle ၏အမှိုက်သရိုက်များသည်အရွယ်အစားသုံးမျိုးရှိသည် (Standard အရွယ်ရှိမိဘများ၏အမှိုက်သရိုက်များ၏ထက်ဝက်) အရွယ်အစားသေးငယ်သောကြောင့်မိခင်သည်သူ၏ရင်သွေးငယ်လေးများကိုသာတပ်ဆင်နိုင်သည်။
Toy Poodle ခွေးကလေးသည် Poodle ၏စျေးအချိုဆုံးအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် $ 1,000 မှ $ 2,000 USD အကြားကုန်ကျသည်။
သင်သည်သင်၏ Toy Poodle ခွေးငယ်လေးများကိုမ ၀ ယ်မီ၊ သင့်ရဲ့မျိုးဆက်ကိုငါသိ၏ ! ဒါကအလွန်အရေးကြီးတယ်၊ တစ် ဦး ရောနှောဖောက် Poodlea'Toy' အဖြစ်။
သင်၏ခွေးကလေးသည်အလွန်သေးငယ်သော၊ ချစ်စရာကောင်းလိမ့်မည်၊ သူတို့တွင်ပျော့ပျောင်းသည့်အမွေးလည်းရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် cuddles ၏ oodles အတွက်ပြင်ဆင်ပါ။
Toy Poodles များသည်သူတို့၏ကျူးကျော်မှုသို့မဟုတ်အကာအကွယ်ကြောင့်လူသိများခြင်းမရှိသောကြောင့်သူတို့၏စိတ်ထားနှင့်ပတ်သက်သောအလံနီများမရှိပါ။
စိတ်ဖိစီးမှုများသောပတ်ဝန်းကျင်ကိုဤခွေးကအလွယ်တကူရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ သူတို့၏အိမ်သည်တင်းမာမှုများနှင့်ပြည့်နှက်ပါက၎င်းတို့သည်ယင်းကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖိစီးလာနိုင်သည်။
သူတို့မှာအဓိကဟောင်ခြင်း၊ သို့သော် မလိုချင်တဲ့အပြုအမူများ သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်လျှင်ဖွံ့ဖြိုးလာနိုင်သည်။
ဤရွေ့ကားအဖော်ခွေးဖြစ်ကြ၏, ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အရွယ်အစားခြိမ်းခြောက်ပေမယ့်ဘာမှဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်သည်။ သို့သော်သူစိမ်းများနှင့်ထိတွေ့ရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူကြသည်။ ဒါကြောင့်နိဒါန်းများကိုဖြစ်နိုင်သမျှချောမွေ့စေရန်ကြိုးစားပါ။
Toy Poodle သည်လူများစွာနှင့်မိသားစုများနှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။
သူတို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင် အခြားအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ (ဥပမာ - ခွေးနှင့်ကြောင်များ) နှင့်မိတ်ဆက်ပေးခြင်း လူသားတွေရောလူသားတွေရော၊ သို့သော်ဤသည်မှာအချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။
Socialization အားလုံးခွေးတစ်ကောင်လိုအပ်သည့်ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကလူမှုဆက်ဆံရေးပမာဏသည် Toy Poodles ၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်လူမှုရေးကိုအောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထင်ဟပ်ပြသလိမ့်မည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Toy Poodle သည်များသောအားဖြင့်ဖော်ရွေသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများရှိပြီးလူများကိုချစ်သောခွေးငယ်လေးဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့ကလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ခွေးတစ်ကောင်သူငယ်ချင်းတွေထက်ပိုပြီးချစ်ကြလိမ့်မယ်။
သူတို့၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုအများအားဖြင့်သွက်လက်။ ပျော့ပျောင်း။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအဖြစ်ဖော်ပြထားသည်။
ဒီခွေးပေါက်စ ပထမ ဦး ဆုံးမှာအနည်းငယ်ရှက်ဖြစ်နိုင်သည် ။ သူတို့နေအိမ်အသစ်သို့ကောင်းစွာအခြေချပြီးသည်နှင့်သူတို့သည်အလွန်ချစ်ခင်တွယ်တာသောမိတ်ဆွေများဖြစ်လာသည်။
Toy Poodle သည်အလွန်သဘောကောင်းသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အိမ်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ မိသားစုများမှစုံတွဲများနှင့်တက်ကြွသို့မဟုတ်အကြီးတန်းနေသောတစ် ဦး ချင်းစီသည်။
အဆိုပါ Toy Poodle ရဲ့အရွယ်အစားကိုသူတို့ပုံမှန်အရွယ်မိဘများထက်သူတို့ကပိုခရီးဆောင်နှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်အနည်းငယ်ပိုမိုလွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်။
ကစားစရာ Poodle အပြည့်အဝကြီး
မိသားစု၏အငယ်ဆုံးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခြင်းသည်၎င်းတို့သည်အမြင့်ဆုံး ၁၀ လက်မခန့်ရှိပြီး ၆ မှ ၉ ပေါင်ကြားရှိသည်။ အထီးသည်မိန်းမထက်အနည်းငယ်ပိုအလေးချိန်ရှိသည် ) ။
Toy Poodle သည် Poodle ခွေး၏ပုံစံငယ်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုတာကသူတို့မှာတူညီတဲ့တည်ဆောက်မှုရှိတယ်။
သူတို့၏နားများသည်သူတို့၏ ဦး ခေါင်းနှစ်ဖက်စလုံးကိုလှန်ချလိုက်သည်။
ဒီဖောက်ဖော်ထုတ်အပြုသဘောလွယ်ကူသည် ရုံ Poodle ကိုရှာပါ (သို့သော်သေးငယ်သည်)!
အဖြူ၊ မုန့်၊ apricot၊ အညိုရောင်၊ အနက်ရောင်၊ ငွေရောင်နှင့် Toy Poodle အနီရောင်များလည်းရှိသည်။
ဤခွေးသည်အချို့သောသူများ (ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်အရောင်တစ်မျိုးထက်မက) ဖြစ်နိုင်ကြောင်းကိုလည်းလူသိများသည်။
The Toy Poodle သည်အလွန်ပင် hypoallergenic ဖြစ်သည် နှင့်အနိုင်နိုင်သွန်းလောင်း။
အဆိုပါ Poodles ကုတ်အင်္ကျီဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဆံပင်ညှပ်ဆံပင်အမျိုးမျိုးတပ်ဆင်နိုင်တာကြောင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ ဤမျှလောက်များစွာသောလူများကဒီဖောက်ရန်ကြိုက်နှစ်သက်ဒါကြောင့်ဖြစ်ကောင်းပါ!
သူတို့ရဲ့ကုတ်အင်္ကျီအဖြစ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အနည်းငယ်ပိုအားထုတ်မှုဖြစ်ပါတယ် သင့်ရဲ့ခွေးရဲ့ကုတ်အင်္ကျီအတွက် matting ကြီးထွားခြင်းနှင့် unsanitary နှင့်နာကျင်ဖြစ်လာပေမည်။
သင်၏ Toy Poodle ကိုနေ့စဉ်သို့မဟုတ်အနည်းဆုံးဒုတိယနေ့တွင်တိုက်ရန်ကြိုးစားပါ။ သင့်၏အနေဖြင့်သရုပ်ဆောင်တစ် ဦး မှပညာရှင်ဆန်ဆန်ရိုက်ယူရန်လည်းသင်လိုအပ်ပေမည်။
သူတို့ရဲ့လက်သည်းများကိုထုပ်ထားပါ။ သူတို့၏ floppy နားများကိုသန့်ရှင်းအောင်မမေ့ပါနှင့်။ နားနေသည့်ညစ်ပတ်ပေရေသောနားသည်ယားလာပြီးနားတွင်ရောဂါကူးစက်နိုင်သည်။
တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီးဘာမှမလုပ်ဘဲနေတာဟာပျင်းစရာကောင်းပြီးဝါးခြင်း၊ ဟောင်ခြင်းစတဲ့မလိုအပ်တဲ့ (သို့) ပျက်စီးစေတဲ့အပြုအမူတွေကို ဦး တည်သွားစေနိုင်တယ်။
Toy Poodles ကိုကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည်သူတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ဖြီးလိမ်းပုံလိုအပ်ချက်များကြောင့်အနည်းငယ်တောင်းဆိုမှုများဖြစ်နိုင်သည်။
လမ်းညွှန် 200 ကယ်လိုရီ
မည်သည့်သေးငယ်တဲ့ခွေးဖောက်လိုပဲ ထို့ကြောင့် Miniature နှင့် Standard နှစ်မျိုးလုံးထက်သေးငယ်သောကြောင့်နေ့စဉ်အစားအစာအနည်းငယ်လိုအပ်သည်။
မိနစ်များ မိနစ် ၄၅ မှ ၆၀ အထိ
မည်သည့်မျိုးရိုးကဲ့သို့ပင် Toy Poodle သည်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်လိုအပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းတို့အားစုစည်းထားသည့်စွမ်းအင်အားလုံးကိုလွှတ်ပေးနိုင်သည်။
သို့သော်၊ သူတို့သည်သင်၏သေးငယ်သောခြေလက်အင်္ဂါများကြောင့်သင်၏ Standard breed ထက်လေ့ကျင့်ခန်းနည်းသည်။ သင်သည်သင်၏ Toy Poodle ကိုလွန်စွာလေ့ကျင့်ပါက၊ ထို့နောက်သူတို့ဒဏ်ရာရေရှည်တည်တံ့လိမ့်မည် ။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံးမိနစ် ၃၀ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်သင့်သည်။ ဤတွင်လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် playtime ပါဝင်နိုင်တယ်!
တကယ်တော့၊ Poodle ဆိုတဲ့စကားလုံး pudeln ကဆင်းသက်လာတယ်။ ဂျာမန်မှာ 'အကြောင်းကို splash မှ' အဓိပ္ပာယ်တစ်အသုံးအနှုန်း ) - ဤခွေးများကိုရေကလေးများဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
မည်သည့်ခွေးမျိုးကိုမဆိုလေ့ကျင့်သောအခါအပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်းသည်ကြာရှည်သွားသည် လေ့ကျင့်ရေး၏အအောင်မြင်ဆုံးနည်းလမ်း )!
ကံကောင်းတာက Toy Poodle ဟာ Standard Poodle နဲ့တော်တော်ဆင်တူတယ်။ ဒါအလွန်အမင်းအသိဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့သည်သင်ယူခြင်းကိုနှစ်သက်ကြရုံသာမက၎င်းတို့အားလေ့ကျင့်ရန်လေပြေတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
သူတို့၏မြင့်မားသောအသိဥာဏ်ကြောင့်သူတို့သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပိုမိုမြင့်မားရန်လည်းလိုအပ်သည်။ သင်၏ခွေးနှင့်ဂိမ်းကစားရန်အချိန်ယူပါ၊ ဖြစ်နိုင်သည့်အခါတိုင်းတစ်ခေါက်ခရီးထွက်ပါ။
Toy Poodle သည် Standard Poodle ကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးပြissuesနာများအတွက်မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။
Progressive Retinal Atrophy သည်မျက်စိရောဂါဖြစ်သည်။ မျက်စိ၏ photoreceptor ဆဲလ်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှယိုယွင်းပျက်စီးသွားပြီးနောက်ဆုံး၌ကုသမှုမရှိလျှင်မျက်စိကွယ်သွားနိုင်သည်။
Standard Poodle နွယ်မှဆင်းသက်လာသည်။ ဒီခွေးပျြောဖြစ်ပါတယ် , ကြော့, မေတ္တာရှင်, သွက်နှင့်အလွန်အသိဉာဏ်။
Toy Poodle ကိုလေ့ကျင့်ခြင်းသည်သူတို့သင်ယူလိုသောကြိုက်နှစ်သက်ရာရိုးရှင်းပြီး၎င်းသည်ပထမ ဦး ဆုံးပိုင်ရှင်များအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်စေသည်။
တစ် ဦး တည်းသော, စုံတွဲများ, မိသားစုများနှင့်ပင်သက်ကြီးရွယ်အိုများအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောအသိဉာဏ်နှင့်သစ္စာစောင့်သိ hypoallergenic pup ရှာဖွေနေမည်သူမဆိုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်; ဒီဖောက်ထွင်းမှုကကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေဟာသေးငယ်တဲ့အရာတွေထဲကထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုတာသက်သေပြတယ်။ သင်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့မှတ်ချက်တွေထဲမှာသင်ဟာဒီခွေးတစ်ကောင်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်ဆိုရင်ငါတို့ကိုအသိပေးပါ
border collie lab ရောနှောအရွယ်အစား
ဂျာမန်သိုးထိန်း husky ရောစပ်မှုဘယ်လောက်လဲ
lab dog ကို pitbull နှင့်ရောသည်